ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းသည်သာ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုး | ဧရာဝတီ
ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းသည်သာ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုး
ဧရာဝတီ| June 11, 2012 | Hits:2,584
8 | | ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အဓိကရုဏ်းများသည် ယနေ့ မြန်မာနိုင်တွင် ဖြစ်တည် စပြုနေသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခြေလှမ်းသစ် များကို နှောင့်နှေးစေသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်က ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ တားဆီး ရပ်တန့်ရန် ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ဥပဒေနှင့် အညီဆောင်ရွက်ရန်၊ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု၊ လက်စားချေမှုများကို ရှေ့တန်းမတင်ရန် သူ၏ အရေးပေါ် မိန့်ခွန်းတွင် ပန်ကြားပြီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် တဦးအနေဖြင့် ပြောသင့်ပြောအပ်သော မိန့်ခွန်းဟု ယူဆပါသည်။
မီဒီယာနှင့် ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များကလည်း ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ တိုက်ခိုက်မှုများ ရှေ့ဆက်မဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် တိုက်တွန်းပြောကြားသည့် နေရာမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
ယမန်နေ့ ညနေက ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေကိုယ်တိုင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ကာ မီဒီယာများ၏ ရေးသားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အနေဖြင့် ဆူပူမှု ဖြစ်ပွားရန် လှုံ့ဆော်သည့် အရေးအသားများ ရေးသားခဲ့သော မီဒီယာကို တိုက်ရိုက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲ မီဒီယာ ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ရေးသားနေသော ဂျာနယ်အားလုံးကိုပါ ခြိမ်းခြောက်သကဲ့သို့ သတိပေးပြောဆို ခဲ့သည့်အတွက် ပြည်တွင်း မီဒီယာများအားလုံး စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ ပြည်တွင်း မီဒီယာသမား အားလုံးမှာ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့် အတွက် တာဝန်ယူမှုရှိရှိဖြင့် ရေးသားဖော်ပြနေချိန်တွင် ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့် တလှေလုံးပုပ်ရသော အဖြစ်မျိုးကို မလိုလားပေ။
အဓိကရုဏ်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်အားလုံးကို ဖြေရှင်းရာတွင် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် အကျယ်အကျယ် မဖြစ်စေရန် လိမ္မာပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟု ယူဆသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သော စုံစမ်းရေး ကော်မတီကလည်း အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကို အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုများ၊ ၀ါဒဖြန့် မှိုင်းတိုက်မှုများ၊ ဥပဒေမဲ့ မင်းမဲ့စရိုက် လုပ်ဆောင် ကျူးလွန်မှုများကို ရပ်တန်းကအမြန်ရပ်တန့်ဖို့လည်း လိုပါသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ညွန်ကြားချက်အတိုင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အကြမ်းဖက်မှုများကို တရားဥပဒေဘောင် အတွင်းက ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အရေးယူသင့်သူများကို အမြန်ဆုံး အရေးယူ အပြစ်ပေးသင့်သလို၊ နစ်နာ ဆုံးရှုံးသူများကိုလည်း ကူညီဆောင်ရွက် ထောက်ပံ့မှုများ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင် ပေးသင့်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို ပြန်ကြည့်မည်ဆိုပါက ၎င်းကိစ္စ မြစ်ဖျားခံရာ မသီတာထွေး ဖြစ်ရပ်၌ အစိုးရက ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့အား အရေးယူမှု နှောင့်နှေးခဲ့သောကြောင့်ဟု ဆိုလျှင် မှားလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ထိုဖြစ်ရပ်တွင် နှောင့်နှေးခဲ့သောကြောင့်သာ မဖြစ်သင့်သော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး အပ်နှင့်ထွင်းရမည့် ကိစ္စရပ်ကို ပုဆိန်နှင့် ပေါက်ရသည့် ကိန်း ကြုံနေရခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသည် သက်တမ်းနုသေးသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲခါစ နိုင်ငံ တနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သိမ်မွေ့စွာ ဖြေရှင်းနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစုံတခုသော ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့် စစ်တပ် အာဏာသုံး၍ ဖြေရှင်းရသည် ဆိုခြင်းက တိုင်းပြည် အလားအလာအတွက် ကောင်းမွန်သော အနေအထားဟု မဆိုနိုင်ပေ။
သို့သော် မလွှဲမသွေ စစ်တပ်အကူအညီကို ယူ၍ ဖြေရှင်းရပြီဟု ဆိုရာ၌လည်း လုံခြုံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းများကို ခွဲခြား၍ မျှမျှတတ ဆုံးဖြတ်ရမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလမ်ဘာသာနှင့် ကွဲပြားသောတခြားဘာသာဝင်များ ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲ နေထိုင်သော နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းသော အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး၊ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး အတွေးအခေါ် များကို ရှေ့တန်းတင်သော နိုင်ငံတနိုင်ငံ မဖြစ်သင့်ပါ။
အကျည်းတန်သွေးစွန်းသော လုပ်ရပ်များ ရပ်တန့်ပြီး မတူကွဲပြားသော လူမျိုးစုဝင်များ၊ ဘာသာရေး ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အရေးကြီးလှပါသည်။ ယင်းသည်သာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ အခြေခံ တန်ဖိုး ဖြစ်ပေသည်။
ကင်တားနားတွေ အများကြီး လိုတယ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ဖြူဖြူ June 11, 2012 - 11:00 pm	ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက် ဆိုသည့် စကားပုံနှင့် တူနေပါသည်။ ယခုလို ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်များသည် သင်တို့၏တကိုယ်ကောင်းဆန် မှုကြောင့်၊ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်မရှိမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရခိုင်အရေး သည် ငါတို့အရေးမဟုတ်ဟု မိုက်မဲစွာ တွေးခေါ်ယူဆပြီး တစ်နပ်စာကို တစ်သက်စာ ထင်မှတ်၍ ဒေါ်လာနောက်ကို လိုက်နေခဲ့ကြသောကြောင့် ရခိုင်လူမျိုးများမှာ ယခုလို အခြေအနေဆိုးအဖြစ်ဆိုးနှင့် ကြုံရခြင်းဖြစ်သည်။
Reply	Hayman June 12, 2012 - 1:45 pm	ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေထိုင်မှာပါ… မပူပါနဲ့… ငါတို့ကမြန်မာတွေပါ… စိတ်ထားနှလုံးထားကောင်းတဲ့မြန်မာတွေပါ… အေးငါတို့ကိုလာမစော်ကားရင်… စိတ်ထားကောင်းတဲ့မြန်မာတွေဖြစ်ပေမဲ့… ကိုယ့်မြေပေါ်လာနေပြီး… ကိုယ့်လူမျိုးကိုစော်ကားလာရင်တော့… ငါတို့သွေးကရဲရဲတောက်လာတယ်… တစ်ခုပဲပြောမယ်… အားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေထိုင်ချင်သပဆို… ငါတို့ကိုတစ်ဘက်သတ်.. ငြိမ်ခံသည်းခံခိုင်းနေစရာမလိုဘူး… ငါတို့မြေမှာလာပြီးငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကို… ဒုက္ခပေးနေတာတွေ… အဓိပ္ပာယ်မဲ့နင်တို့အိမ်တခြမ်းဖဲ့ပေးပါလားလို့တောင်းနေတာမျိုးတွေကိုရပ်တန်းကရပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။
Reply	madi June 19, 2012 - 4:06 pm	Burmese army killed karen, kachin and shan people. why don’t you fight for them.
Reply	Nyo Tun Naung June 12, 2012 - 3:49 pm	အစိုးရ နဲ့ စစ်တပ် ကိုဆန့် ကျင်ရေးသားတိုင်း လူထု ထောက်ခံမှု ရမယ် ထင်နေ ရင်အရမ်းမှားနေပြီ။သိပ်ပြီး ခေတ်နောက်ကျနေပြီ ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ တော့မသိဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပြည် တွင်းမှာ ကိုယ် နေတဲ့သူ တွေ ကကိုယ့် လူမျိုး အကြောင်း၊ ကိုယ် နိုင်ငံ သမိုင်း ကို ကိုယ် သိတယ်ဗျ။
ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး စံ နှုံး ဆိုတာတွေ ကကိုယ့် အမျိုးသားရေး ကိုယ်လူမျိုးအရေး ကိုယ့်နိုင်ငံအရေး ထက်ကိုယ့် တိုင်းရင်းသားမဟုတ် တဲ့ လူတွေ အပေါ်မှာ ပိုပြီးစေတနာပိုနေ တယ်၊ ဒီလို စကားလုံးလှလှ တွေ သုံးပြီး အင်အားချို့ တဲ့ တဲ့ ကျုပ် တို့ နိုင်ငံ ကို အတင်း ဖိအားပေးပြီး ဒီ သွေးမတူ မျိုးမတူ တဲ့သူတွေ ကို အတင်းအဓမ္မ လက်ခံ ခိုင်းခဲ့ တာ က ဒီပြသာနာ အစဘဲ။
Reply	bobogyi June 13, 2012 - 10:15 am	Dear Mr Editor, the heading of the editorial is so good.Yes, we, all of Myanmar should be practiced as above the heading of the editorial.I am simply supposed you have been understood and penetrated the real causes and effects of the current Rohinga terrorism at Rakhine state, Myanmar.These Rohinga terrorism at Rakhine state,Myanmar was the great dangerous and threatening to not only the territory and security of Rakhine state but also the territory and the national security of the whole Myanmar.Did you realize?So that, before you express your dream or idea to all walks of Myanmar and the world , you should be deeply reviewed your idea or concepts.Did my idea or dream really useful or practical for the current Rohinga terrorism at Rakhine state, Myanmar. The man in the street of Myanmar and the world were also known the general idea or dream like as above your editorial.
Reply	Maung Naing June 14, 2012 - 6:43 pm	ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းလိုလိုမှာ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ နိုင်ငံသား၊ အသားအရောင်၊ လိင် စတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အခြေပြုပြီး ငါတို့နဲ့သူတို့ဆိုတဲ့ ” Us and Them” ခွဲခြားမှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ရန်၊ ငါ စည်းခြားတယ်လို့လဲ ဆိုနိုင်တာပေါ့။ ငါတို့ ဂျာမာန်တွေ၊ သူတို့က ဂျူးတွေ၊ ငါတို့က ဟူတူတွေ၊ သူတို့က တွတ်စီတွေ စသည်ဖြင့် လူလူချင်းအမျိုးအစားခွဲခြားလိုက်ခြင်း (Classification) ဟာ Genocide လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အစမှတ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရောယှက်နေသော ဆက်နွယ်မှုတွေရှိမနေတဲ့ လူမျိုးစုနှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုပြီးရှိကြတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ ကာကွယ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အဓိကစွမ်းအားကတော့ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ၊ အသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေကို ကျော်လွန်သွားတဲ့၊ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနဲ့ နားလည်မှုတွေကို တိုးပွားစေတဲ့၊ ပိုင်းခြားမှုတွေကို ကျော်သွားတဲ့ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းကိုသာ အားပေးတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့၊ အဆောက်အအုံတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို့ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းက ဘုံရပ်တည်ချက်တွေကို မဖြစ်မနေရှာဖွေလာရပြီး … အဲဒီ့အချက်ကိုက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေကို တားဆီးနိုင်တဲ့ အဓိကစွမ်းအားဖြစ်လာပါတယ်။
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (Classification) ဟာ အမျိုးအစားခွဲခြားထားရုံနဲ့တော့ သိပ်ပြဿနာမရှိသေး ပါဘူး။ သူ့နောက်ကနေ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လာတဲ့ … အမည်တပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း (Symbolization) ကြောင့် အခြေအနေတွေက ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။
အုပ်စုတစ်ခုခုက အခြားအုပ်စုတစ်ခုခုကို အမည်နာမတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တံဆိပ်တစ်ခုကပ်လိုက်ပါတယ်။ အသားအရောင်ကို လိုက်ပြီးဖြစ်စေ၊ အဝတ်အစားကိုလိုက်ပြီး ဖြစ်စေ၊ မတူညီသော ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လိုက်ပြီးဖြစ်စေ အခြားသူများကို အုပ်စုတစ်စုထဲ သွတ်သွင်းလိုက်ပြီး … သူတို့ဟာ ဂျူးတွေပဲ၊ သူတို့ဟာ ဂျစ်ပစီတွေပဲ၊ သူတို့ဟာ နီဂရိုးတွေပဲ စသည်ဖြင့် တံဆိပ်တစ်ခု ကပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် … ခွဲခြားမှုဟာ ပိုပြီး ပီပြင်ထင်ရှားလာပါတယ်။
ဂိုဏ်းကဏ္ဍတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ခြင်းကိုလဲ ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုရှိတာက ဥပဒေအရ ကန့်သတ် တားမြစ်ခြင်းတွေဟာ လူကြိုက်များနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအင်အားတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုမရတဲ့ အခါ အရာ မထင်တတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် … ဟူတူ၊ တွတ်စီ စတဲ့စကားလုံးတွေဟာ … ၁၉၈၀ ခုနှစ် အထိ ရဝမ်ဒါဘာသာစကားအရ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားပေမယ့် … အများက လက်ခံသုံးစွဲ ခဲ့တာကြောင့် အတည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းစေခြင်း (Dehumanization) ဖြစ်စဉ်ကတော့ အားကြီးတဲ့ အုပ်စုက အားနည်းတဲ့ အုပ်စုရဲ့ လူသားဖြစ်တည်မှုကို ငြင်းဆန်ချင်လာရာကနေ စပါတယ်။ အမျိုးအစား ခွဲခြားပြီး အမည်တံဆိပ်တစ်ခုခု တပ်လိုက်တဲ့ အစုအဖွဲ့လေးတွေကို တိရစ္ဆာန်တွေ၊ ရောဂါသည်တွေ၊ အဆင့်နိမ့်သူတွေ နဲ့ တတန်းတစားတည်းထားလိုက်ပြီး … လူသားအဖြစ်ကနေ ယုတ်လျော့သူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတယ်။
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေခြင်းဟာ … သာမန် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေထက် အများကြီး ပိုဆိုးပါတယ်။ အဲဒီ့အဆင့်မှာဆိုရင် … အမုန်းတရားကိုတိုးပွားစေတဲ့ ၊ ဒေါသကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဝါဒဖြန့်စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ အသံလွှင့်မှုတွေကို ခပ်များများသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ … လူထုအနေနဲ့ မြင်ရကြားရသမျှတွေဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု တွေကိုဦးတည်တဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေလား၊ အမှန်တကယ် လူထုကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်လိုစိတ်နဲ့ ပြောတာတွေလားဆိုတာကို ခွဲခြားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ … လှုံ့ဆော်မှုတွေကို တန်ပြန် ချေဖျက်ပစ်နိုင်တဲ့ စည်းစနစ်ကျသော၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်သော ကာကွယ်မှု၊ သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ အားနည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေခြင်းစတဲ့ အဆင့်တွေနောက်မှာတော့ မိမိတို့ မဟုတ်သော အခြား အုပ်စုကို နှိပ်ကွပ်ဖျက်သိမ်းပစ်လိုတဲ့ အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုက … နောက်လာမယ့်အဆင့်တွေကို လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် … အခိုင်အမာ ဖွဲ့စည်းခြင်း (Organization) ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို စလုပ်ပါတော့တယ်။ များသောအားဖြင့် … လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေကို အစိုးရတစ်ရပ်ရပ်(သို့မဟုတ်) အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်ခုခုက စုစည်း ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန် ဖို့အတွက် တိုက်ခိုက်ရေး အစုအဖွဲ့လေးတွေ ဖွဲ့ပြီး လေ့ကျင့် ပေးတာမျိုး၊ လက်နက် တပ်ဆင်ပေးတာမျိုးတွေကို စတင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး … လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေအတွက် အစီအစဉ်ကို စနစ်တကျရေးဆွဲပါတယ်။ ဒီလိုအဆင့်မျိုးကို ကာကွယ်ဖို့ကတော့ … အဲဒီ့လိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ပြီး တရားဥပဒေအရ အပြစ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုများခွဲထုတ်ခြင်း (Polarization) လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတော့ … အစွန်းရောက်တွေက အမုန်းတရားကို တိုးပွားစေတဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေကို သုံးပြီး အုပ်စုတွေအများကြီးဖြစ်အောင်ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် … လူမျိုးခြားမယူရ၊ လူမျိုးခြားနှင့်မဆက်ဆံရ စတဲ့ ဥပဒေတွေတောင် ထုတ်ပြန်လေ့ ရှိပါတယ်။ အစွန်းရောက်သမားတွေဟာ … ကြားအမြင်ရှိသူတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် … ကြားအမြင်ရှိသူတွေကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အစွန်း မရောက်သော သမာသမတ်ကျတဲ့ အမြင်မျိုးတွေကို များများပြန့်နှံ့စေခြင်းနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအားဖြင့် … အစွန်းရောက်အမြင်တွေကနေ ကင်းလွတ်နိုင်ပါတယ်။
အစွန်းရောက်သမားတွေဟာ … ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကို သူတို့ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို အကြောင်းပြု ခွဲခြားရွေးထုတ်(Identification)ပြီး သတ်ဖြတ်ရမယ့် စာရင်းကိုပါ ရေးဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ကျူးလွန်ခံကြရတော့မယ့် လူအုပ်စုဟာ တံဆိပ်တစ်ခုခု ကပ်ခံရတာမျိုး၊ တစ်နေရာရာကို အတင်းပို့ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။
နာဇီတွေဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကို … ချွေးတပ်စခန်းတွေဆီ ပို့တာမျိုး၊ ဂတ်တို လို့ခေါ်တဲ့ သီးခြားရပ်ကွက်တွေဆီပို့တာမျိုး၊ စားနပ်ရိက္ခာခေါင်းပါးပြီး ငတ်ပြတ်သေသွားနိုင်တဲ့ နေရာတွေဆီ အင်အားသုံးပို့ဆောင်တာမျိုးတွေဟာခွဲခြားရွေးထုတ်ခြင်း (Identification) ရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ Genocide လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဟာလျှင်လျှင်မြန်မြန်တရားဝင် စတင်လာပါတော့တယ် …။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို သတ်ဖြတ်သူတွေဘက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်သားကောင်တွေကို လူအဖြစ်မသတ်မှတ်တော့တာကြောင့် အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းခြင်း (Extermination) လို့အမည်တပ်ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့ … (Denial) လို့ခေါ်တဲ့ ငြင်းပယ်ဖုံးကွယ်ခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွေ အပြီးမှာ ကျူးလွန်သူတွေတိုင်းလိုလိုပြုလုပ်တတ် ကြတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်ဖြတ်ခံရသူတွေရဲ့ အသက်မဲ့ခန္ဓာတွေကို ကျင်းကြီးတွေတူးပြီး မြှုတ်နှံခြင်း၊ မီးရှို့ဖျက်စီးခြင်း၊ အထောက်အထားတွေကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ မျက်မြင်သက်သေများအား ခြိမ်းခြောက်နှုတ်ပိတ်ခြင်း တွေကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး … သူတို့ဟာ သူတို့တွေ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကို ငြင်းဆန်တတ်ကြပြီး … အမြဲလိုလို အကျူးလွန်ခံရသူတွေအပေါ် ပြစ်တင်ပြောဆိုတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ပါတယ်။
ကျူးလွန်သူအများစုဟာ … ပြဿနာကိုအမြဲရှောင်လွှဲပြီး အခြားသူတွေအပေါ်ပုံချဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ … လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေဆီ ဦးတည်သွားနိုင်လား …။ ဦးတည်နေတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ့လိုမဖြစ်ရအောင် ကျနော်တို့တွေ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။
အခုလောလောဆယ် ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ပုံမှားယွင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြဿနာရဲ့ အချိန်ကြာမြင့်လာပြီး အခြားသောဒေသတွေကိုပါ ပြန့်ပွားဆိုးဝါးလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု(Genocide) ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် … မြန်မာနိုင်ငံသား အမြောက်အများသေကြေပျက်စီးခြင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ သိက္ခာကျပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့တွေအားလုံး ဘာပဲလုပ်လုပ် … ကိုယ့်လုပ်ရပ်တစ်ခုခုဟာ တိုင်းပြည်ကို အန္တရာယ်တစ်ခုခုဆီတွန်းပို့နေတဲ့လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်နေမလား၊ တိုင်းပြည်ကို အန္တရာယ်မကျရောက် အောင် ကာကွယ်တဲ့လုပ်ရပ်မျိုးလားဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေ။
Reply	မမ June 28, 2012 - 3:06 pm	ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ပါ။ ကရင်ပါလို့ အရင်နိဒါန်းပျိုးပါရစေ။ ဘုရားတိုင်းဟာ
အချင်းချင်းမေတ္တာထားဖို့ဘဲ မိန့်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ ရခိုင်ဖြစ်စေ။ ဘင်္ဂါလီဖြစ်စေ မေတ္တာတရား
ဟာရင်ထဲမှာ တစ်ကယ်ရှိကြရင် ဒီလိုဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ လူမျိုးစွဲ၊ဘာသာစွဲ
သိပ်ကြီးလာရင် လောကကြီးမှာ ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှ မရှိဘူးဆိုတာ သမိုင်းကသက်သေပြခဲ့
ပြီးပါပြီ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို နားမလည်နိုင်တာတစ်ခုက ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုဆောင်တစ်ချို့
ကို ရခိုင်၇ွာတွေက ရခိုင်တွေက တုတ်နဲ့ရိုက်သတ်ခဲ့တာကိုတောင် ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်က အစွန်း
ရောက်တစ်ချို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ ရခိုင်အားလုံး မဟုတ်ပါဘူးလို့ နားလည်ပေးခဲ့ပြီး အကျယ်မ
ချဲ့ခဲ့ကြပါဘူး။ (သေသွားခဲ့ရသူတွေရဲ့ မိသားစုတွေ ကျန်နေပါသေးတယ်။) အခုရခိုင်လူမျိုး
တွေထိတဲ့အခါကျတော့ ဘင်္ဂါလီအားလုံး မဟုတ်ပါဘူး လို့ ဘာဖြစ်လို့ နားမလည်ပေးနိုင်
တာလား။ ဘာဖြစ်လို့ အစွန်းတွေရောက်နေရတာလည်း။ သိပ်အစွန်းရောက်နေရင်လည်း
ဘင်္ဂလားနိုင်ငံနဲ့ပါ အဆက်အသွယ် ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့။ ကူးသန်းဆက်သွယ်
မှုမလုပ်ကြနဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်အမျိုးသားခြင်းဘဲ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကား
ကြပေါ့။ ဖြူဖြူဆိုတဲ့သူရေးတာ သိပ်ပြင်းထန်လွန်းလို့။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု ပျက်
စီးမှာစိုးလို့ ရင်ထဲမျိုသိပ်ထားတာတွေ ဖွင့်ပြောလိုက်တာဘဲ။ ဘယ်ဘာသာ။ ဘယ်လူမျိုးဘဲ
ဖြစ်ဖြစ် အစွန်းသိပ်ရောက်လွန်းရင် အကျိုးမဲ့စရာတွေဘဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ ပညာသတိရှိကြစမ်း
Reply	မမ June 28, 2012 - 3:19 pm	RNDP ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။ လာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၇ခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့မဲကို NLD
နဲ့ယှဉ်ပြီး မရနိုင်မှာစိုးရိမ်ပြီး ။ တစ်ဖက်စောင်းနင်းတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ မြန်မာပြည်ကြီးကို
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ပြည့်နေစေချင်ပါတယ်။ အမုန်းတရားတွေ၊ အာဃာတတရားတွေနဲ့ မပြည့်
စေချင်ပါဘူး။ ကောင်းနေတဲ့လူတစ်ချို့ကိုတောင် အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ်ဝါဒီဖြစ်အောင်
တွန်းမပို့ကြပါနဲ့။ ဘင်လာဒင်ရဲ့လူတွေက ဒီလိုမျိုးလူတွေကို ရှာဖွေကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပုံသွင်း
ပေးတတ်ကြတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့။ အဲ့ဒီအခါကြရင် မြန်မာစစ်တပ်မပြောနဲ့ ၇ခိုင်တစ်မျိုးလုံး
အကုန်တိုက်တောင် မနိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ၊ အာဖဂန်နဲ့အီရတ်မှာ သက်သေတွေရှိပါတယ်။
Reply	zorrow August 11, 2012 - 12:20 pm	မောင်နိုင်….အလွန်တော်ပါသည်။သာဓုခေါ်ပါ၏။မမ သည်လဲလူသားမှန်သောစိတ်နှလုံးရှိ၏။ ကျန်းမာကြပါစေ။တိုင်းပြည်အတွက်အဖိုးတန်သောသူများဖြစ်ပါသည်။